စိတ်ဝင်စားစရာ မာမာရဲ့ ဝါသနာများ: Palauမဆလာ အရသာထမင်း
မုံလာဥနီ ဂေါ်ဖီ ပူစီနမ်တို့ကိုသံပုရာရည်ရောကာ
ဟင်းချက်ရာမှာသုံးတဲ့ Palau မဆလာထုတ်
ဒီနေ့တော့ palau မဆလာနဲ့ ချက်ဖြစ်တဲ့ ထမင်းလေး ချက်ဖြစ်ပါတယ် ဒံပေါက်နဲ့ အရသာနဲ့ တော်တော်လေး တူပါတယ် ဒီထမင်းကိုတော့ အော်စီရောက်ခါစက အစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်မှာ စားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထမင်းလေးက FIJI ကျွန်းကထွက်တဲ့ မဆလာလေးနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ထမင်းလေးပါ။
အရသာလေးကို အရမ်းကြိုက်တာနဲ့ ချက်နည်းလေးလဲမေး မဆလာလေးလဲ တောင်းထားခဲ့တာ ကြာပါပြီ ချက်မယ်ချက်မယ်နဲ့ စိတ်ကူးလိုက် စိတ်ကူးလေး ပျက်သွားလိုက်နဲ့ မချက်ဖြစ်သေးတာပါ။
အခုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး တူအောင်တော့ ချက်ထားပါတယ် ဒီထမင်းရဲ့  ရာဇဝင်ကိုတော့ မာမာသေချာမမေးခဲ့ရလို့ မသိပါဘူး FIJI ကျွန်းထွက် ဒေသရဲ့  အစားအစာ တစ်ခုလို့ ထင်မိပါတယ်။
ဒီမဆလာ အနံ့လေးက ဒံပေါက်လောက် အနံ့လောက် မပြင်းသလို ချက်တဲ့ အခါမှာ ထောပတ်လဲ မပါတာကြောင့် စားလို့ကောင်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ထမင်းလေးပါ။
ဒံပေါက်ထက်စာရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ပိုပြီး ညီညွတ်တဲ့ ထမင်းလေး ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး နောက်တစ်ခုက ဘာအရောင် ဘာဆိုးဆေးမှ ထည့်မထားတဲ့အတွက် အန္တရာယ်လဲ ကင်းပါတယ်။
စိတ်ထဲမှာ စားချင်လာတာနဲ့ မာမာတစ်ခါမှ မချက်ဖူးဘဲ ဒီနေ့မှ စမ်းချက်ကြည့်တာပါ စမ်းချက်ကြည့်တာလို့ ဆိုရပေမဲ့ စားရတာ တော်တော့်ကို ကောင်းပါတယ် ချက်ပြီးပြုပ်ပြီး ကလေးတွေနဲ့ အတူစားနေရင်းက လက်မလေးတွေထောင်ပြီး အားပေးကြပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ မာမာချက်တဲ့ ချက်နည်းလေးကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ချက်နည်းထဲမှာ လိုအပ်တာလေးတွေ ကျန်ခဲ့ရင်ရယ် စာအရေးအသား လွဲမှားတာပါခဲ့ရင်တော့ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ် ချက်နည်းလေးနဲ့ မဆလာထုတ်လေး ပေးလိုက်တဲ့ အစ်မကို ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ချက်နည်းမှာ လိုအပ်တာလေးတွေ လွဲခဲ့တာလေးတွေရှိခဲ့ရင်လဲ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ် တစ်ခါမှ မချက်ဖူးဘဲ စမ်းချက်တဲ့ ထမင်းတောင် ချက်မလောက် ဖြစ်သွားခဲ့တာ ကိုယ်တိုင်တတ်ပြီး ချက်ကျွေးခဲ့တဲ့ အစ်မအိမ်က ထမင်းဆို ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆို မာမာ့စိတ်ထင် နတ်သုဒ္ဒါတစ်မျှပါဘဲ စားခဲ့ရတဲ့အတွက်ရော ချက်နည်းလေး မျှဝေပေးတဲ့အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ကြက်ပေါင်သား - တစ်ကီလို
ပလောက်မဆလာ - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲ
ပစ္စည်းမျာ အားလုံးကို ဇလုံတစ်လုံးထဲမှာထည့်ပြီး အရသာဝင်အောင် နယ်ပေးကာ cling wrap နှင့် လုံအောင်ပိတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာ မခဲတဲ့ အကန့်ထဲမှာ ၁၂နာရီခန့် နှပ်ထားပေးပါ
နောက်နေ့မနက်မှာ အရသာ နယ်ထားသော ကြက်သားကို အိုးတစ်လုံးထဲထည့်ပြီး တစ်ဝက်နီးပါးကျက်အောင် ချက်ထားပေးပါ
(ပလောက်မဆလာ ထမင်း ၆ပွဲစာချက်ရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ)
(ပလောက်မဆလာ ထမင်းချက်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ)
အောက်ခြေမကပ်ဘဲ အိုးအသားထူသော အိုးထဲမှာ တစ်ဝက်ကျက်အောင် ချက်ထားသော ကြက်သားကို ဖြန့်ထည့်ပါ
ပြီးတာနဲ့ မီးပိတ်ပြီး မိနစ်၃၀လောက် မီးဖိုပေါ်မှာ ဆက်နှပ်ထားပြီးရင် ကြက်သားဒံပေါက်ထမင်း မွှေးမွှေးလေး ရပါပြီ။
ပလောက်မဆလာနံ့  သင်းနေတဲ့ ထမင်းလေးကို သံပုယိုသီးသနပ် ဂေါ်ဖီ မုံလာဥနီ ပူစီနံ ငရုတ်သီးစိမ်း ပဲနီလေးဟင်းချိုတို့နှင့် စားသုံးရန် ပြင်ဆင်ပေးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 9:48 am
Phyu Phyu 21 January 2013 at 11:49
အစ်မရေ.. ပလောက်မာဆလာက ကြက်သားနယ်တဲ့ထဲကို ထည့်တာပေါ့နော် ...
ကျွန်မဆို အစ်မလို စိတ်ရှည်လက်ရှည် မလုပ်တတ်ဘူးတော့..
အစ်မရဲ့ ပလောက်မာဆလာ ထမင်းလေးကို တဝကြီး စားသွားပါတယ် ... ^_^
Tuumar9February 2013 at 20:25
မဆလာက ကြက်သားထဲမှာထဲ့နယ်လိုက်တာပါ ညီမလေးရေ..
Tuumar 21 January 2013 at 17:36
မဆလာက ကြက်သားထဲမှာထဲ့ပြီးတစ်ခါထဲနယ်လိုက်တာပါ ညီမရေ..
Anonymous 21 January 2013 at 22:23
Tuumar 22 January 2013 at 09:05
Theingi 22 January 2013 at 04:30
မာမာရေစားချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲ...မချက်တတ်လို့လေ...မြန်မာပြည်မှာတော့ အဖွားကငါးကြင်းငါး အတစ်ကြီးတွေနဲ့ချက်တာ တော်တော်ကောင်းတယ်သိလား....အားလူးပြုတ်၊ဘဲဥပြုတ်လေးတွေပါထည့်ချက်ကြတယ်။ ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ ညီမတို့အိမ်မှာချက်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြတာပါ။
Tuumar 22 January 2013 at 09:09
အဲဒီလိုပြောရင် ငိုချင်တယ်သိလားTheingi .
Theingi 23 January 2013 at 05:19
မာမာရေညီကလဲမစားရညှော်ခံပြောတာပါ... ဒီမှာလဲရေချိုငါးမရတော့ စားခဲ့ဖူးတဲ့ငါးတွေကိုမျက်စိထဲမြင်ရောင်ပြီး နေရတဲ့ဘ၀ပါ :(
Anonymous 22 January 2013 at 09:04
မာမာ ရေ စမ်းချက်ကြည့်အုံးမယ် စားကောင်းမဲ့ ပုံပဲ
Tuumar 22 January 2013 at 09:10
ဟား ! ရှယ်ပဲ စားချင်လိုက်တာ
မမမာရေ ချက်စားချင်စရာတွေ အများကြီးဖြစ်နေပြီ
ဟိုဟင်းလေး ချက်စားချင် ဒီဟင်းလေး ချက်စားချင် နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဟင့်
စားလို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ပလောက်မဆလာထမင်းလေး အားပေးသွားပါတယ်....
Tuumar 23 January 2013 at 10:59
ရန်ကင်း(Norway) 25 January 2013 at 22:11
ချက်နည်းတွေကတော့စိတ်ဝင်စားပြီးအရသာရှိမဲ့အနေအထါးပဲ၊ဒါပေမဲ့အချင်အတွယ်နဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကတခါတလေအခက်အခဲရှိတတ်ပါတယ်၊အကြံပေးချင်တာကဟင်းဖြစ်စေအစားအစာတခုခုပြုလုပ်နည်းဖြစ်စေအချင်အတွယ်ကိုအနီးစပ်ဆုံးမြန်မာအချိန်(သို့)အခြားချိန်တွယ်နည်းကိုရောသုံးပေးရင်ကဘာတ၀ှမ်းရှုိုမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်အကျိုးရှိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်၊ဥပမာကြက်ပေါင်ဘယ်နှစ်ချောင်း(ဘယ်နှစ်ကီလို(သို့)ပေါင်၊ဆန်နို့ဆီခွက်၎လုံ ကီလိုဝက် စသည်ဖြင့်ပေါ့၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
Tuumar 26 January 2013 at 19:46
ကျမလဲ အနီးစပ်ဆုံးအချင်အတွယ်လေးတွေ ရအောင်ချက်ပြပေးထားပါတယ်.
တစ်ခါတရံ ကျမတို့ချက်သလို One cup တို့ one teaspoon တို့ one tablespoon တို့ဆိုတာ အိမ်ရှင်မတိုင်းမှာ အဆင်သင့်ရှိချင်မှရှိကြမှာပါ ဒါကြောင့်မို့ အနီးစပ်ဆုံးသုံးနိုင်အောင် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ထမင်းစားဇွန်း ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ခွက်လေးတွေနဲ့ စံနူံးထားပြီးချက်ပြထားပါတယ်..ကြက်ပေါင်ကိုလဲ ဒီလိုထမင်းမျိုးမှာ ကြီးကြီး ငယ်ငယ် တစ်ပွဲ ကြက်ပေါင် တစ်ပေါင်နူံးနဲ့ဘဲပြင်တတ်လို့ ၆ပွဲစာ၆ချောင်းဘဲရေးလိုက်တာပါ..ဆန်ကိုလဲထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ဗူးနဲ့ဘဲ အချင်အတွယ်တွက်ပြီးရေးပေးထားပါတယ်
Where can i buy that masalar?
Can buy at NTUC?
Tuumar 18 February 2013 at 11:41
Thanks ma ma. I will try coming sun day.
Anonymous 29 April 2013 at 00:14
Now i got Pulao masalar from Mustafa , but spelling is not same.
$ 1.2 only . I try to cook with Pulao Masala.